chikamu: Rovedza Kufamba Italia
musha > Rovedza Kufamba Italia
Zvitima ndiyo nzira yakanakisisa kuenda kuItaly pasinei mwaka. zvisinei, ivo kuva ngozi uye vasununguka nezvechisarudzo, kunyanya munguva yechando. Winter chitima kufamba muItaly ngozi chete, asi zviri kutsanya uye akarongeka. This article was…
Iyo nzvimbo nani kunakidzwa Pizza kupfuura nyika kuti tega nayo, rudyi? vokuItaly rudo, rudo, rudo ichi chinonaka tudyo-akatendeuka-kudya! Ndosaka cook kuItaly vari ikava yakachena muchimiro ounyanzvi, uye pakupedzisira UNESCO-mvumo! Kungomberereka kumativi Italy, you’ll find pizzerias opened in…
Kana uri Solo mufambi uye uchida kurovedza kufamba sezvinoita nomad, ipapo uri panzvimbo chaiyo. Dzidzisai rokufambira ndeimwe yenzira kuenda kuburikidza Europe kana uchida kuwana zvose Europe ine kupa. Iva…
Ose waini wechokwadi anoda anoziva kuti maguta waini muEurope kupa kutengeka uye zvinoshamisa waini. Kubva kuFrance Italy, uye zvakare, nyika idzi vanozivikanwa vakawanda kuti zvakanaka waini munyika. Muchikamu, this is due to the ideal climate growing…
Hapana kunzwa nani pane kudonha avete zvinyoronyoro kutamira chitima uye uchimuka mangwana nenguva yako kuenda, zvadzo maminitsi kubva mawere. In Europe, isu takapambwa kusarudza. It’s not…
Kunyatsoshandisa kutonhora mwaka kushanyirazve Best Winter Festivals in Europe. Mitambo inosanganisira zvose kubva Skiing uye zvinhu zvinotsvedza mumakomo echando mimhanzi, mutambo, Ice zvivezwa, , ikapenya haradhi vaipemberera. Pasi pamusoro yedu 5 roundup chii Uchaona zvichiitika muEurope…
Train Travel Holland, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Luxembourg, Chitima Kufamba Scotland, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Vatariri kwese nguva dzose chinoshamisa uye isu kuzviita kuwana maguta yakanaka, nhoroondo imwe nyika kana tsika dzakasiyana chaizvo needu. zvisinei, haufaniri kuenda kure nomusha kuwana nzvimbo yakanaka. There are a few European train tours…
The Ultimate Guide To Italy kuti Best Yoga Destinations
kubudikidza Miriam Cihodariu
Chimwe chinhu chakanaka kwazvo chine Italy sezvo kuzororo nzvimbo iri kuti haisi chinhu uchingoda muvare bvudzi rako mugomo mazita. Unogona kudzokera Italy zvakare uye zvakare uye vachiri vasina kukwana uyu nyika wakajeka uye ayo richinaka fares, nor…
Ah, chikafu ... mbiri, zvinonaka chikafu. Zviri nyore chaizvo kuti kupenga kana kugara Europe anokupa chikonzero zvikuru nokuti! The yakanakisisa maguta Foodies vari Europe, kuvimba isu tiri foodies uyewo, and so will you when you’re…
Beautiful Cities kuzoshanyira MuAustria And Italy By Rail
With dzakawanda yakakwirira Profiles, aisimbisa nyika vakaita France, Jerimani, uye Switzerland, hazvishamisi Austria haina kuwana nzeve zvikuru! Ok, Italy kumbogara dzadonha mepu, asi chitima nzira kubva Austria kuItaly chokwadi kwave yaregeredzwa. asi, that’s about to…
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Italia, Travel Europe